एनआरएन नेतृत्वको बहस - Ratopati
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को आठौँ विश्व सम्मेलन आगामी अक्टोबर १४ देखि १८ सम्म काठमाडौँमा आयोजना हुने भएको छ । सम्मेलनको मिति तय भएसँगै अबको नेतृत्व कसको पोल्टामा पर्ने भन्ने गरमागरम बहस एनआरएनमा सुरु भएको छ । एनआरएनएमा अहिलेसम्म विश्वभरमा ७५ देशमा राष्ट्रिय समिति बनेका छन् । यी राष्ट्रिय समितिले आगामी सेप्टेम्बर १५ सम्ममा आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समितिको निर्णय बमोजिम अहिले विभिन्न देशहरुमा एनआरएन सलबलाउन थालेका हुन् ।
यूएईले राष्ट्रिय अधिवेशनका लागि सेप्टेम्बर ८ का लागि मिति तय गरिसकेको छ भने अन्य देशहरुले पनि सेप्टेम्बर १५ भन्दा अगाडि नै अधिवेशन सक्ने गरी गृहकार्य सुरु गरेका छन् । विश्व सम्मेलनमा मध्यपूर्वको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले सबैको ध्यान यतिखेर मध्यपूर्वले खिचेको छ । आईसीसी सम्मेलनमा मध्यपूर्वबाट सहभागी हुने प्रतिनिधिको सङ्ख्या धेरै हुने गरेकाले पनि मध्यपूर्वलाई सबैले विशेष चासोको साथ हेर्ने गरेको पाइन्छ ।
विभिन्न मुलुकहरुका राष्ट्रिय समितिको अधिवेशनको घोषणासँगै सङ्घको आगामी नेतृत्व कसले लिने भन्ने भित्रभित्रै खेल सुरु भइसकेको छ । वर्तमान समितिका अध्यक्ष शेष घलेले थालनी गरेका केही महत्वपूर्ण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सङ्घको आगामी कार्ययोजना कस्तो बन्छ, सबैको चासो र चिन्ता हुनु स्वभाविक पनि हो । मध्यपूर्व सहित विश्वभरि नै विविध कारणले एनआरएनएप्रतिको आस्था कम हुन थालेको आशङ्का गरिरहेका बेला अब नयाँ नेतृत्व कस्तो बन्ला भनेर सबैले आफ्नोआफ्नो आँकलन पनि सुरु गरिसकेका छन् ।
वर्तमान समितिका उपाध्यक्षद्वय कुमार पन्त र भवन भट्ट आगामी कार्यकालका अध्यक्ष पदका दाबेदार हुन् । पन्त अघिल्लो कार्यकालमा महासचिव भएर सफलतापूर्वक कार्यकाल पूरा गरेका व्यक्ति हुन् भने भट्ट लगातार २ कार्यकालमा उपाध्यक्ष भएका एनआरएनए अभियानका अनुभवी व्यक्तित्व मानिन्छन् । उपाध्यक्ष पन्तले युरोपलगायत अस्ट्रेलिया, मलेसिया, ओमान, अमेरिका, क्यानाडा न्युजिल्यान्ड पुगेर आफ्नो पक्षमा लबिङ गर्न सुरु गरिसकेका छन् । यस्तै अर्का उपाध्यक्ष भट्टले आफू २ पटकसम्म उपाध्यक्ष भइसेको भन्दै स्वभाविक रुपमा अध्यक्षको दाबेदार रहेको भन्दै चुनावी तयारीमा जुटेको उनी निकटका व्यक्तिहरु बताउँछन् । पन्त जर्मनीमा बसेर होटल व्यवसाय गर्छन् भने भट्ट जापानका सफल व्यवसायी हुन् ।
पन्त निकट मानिएको नेपाल ब्रिटेन डट कमका अनुसार सङ्घको अहिलेका कार्यसमितिको अधिकांश पदाधिकारी उपाध्यक्ष पन्तको पक्षमा रहेको बताइएको छ । उक्त अनलाइनले सङ्घको २५ पदाधिकारीमध्ये २१ जना पन्तको पक्षमा खुलेर प्रचारमा लागेको दाबी गरे पनि त्यस्तो नभएको भट्ट निकट स्रोतको दाबी छ । महासचिव डा. बद्री केसी, कोषाध्यक्ष हिक्मत थापा, सचिव अर्जुन श्रेष्ठसमेत पन्तको नेतृत्वमा जान तयार भइसकेको बताइन्छ । सङ्घको महिला संयोजक सपिला राजभण्डारी, सहसंयोजक रजनी प्रधानसमेत पन्त निकट मानिन्छन् । प्रवक्ता रञ्जु थापा अहिले मध्यमार्गी भूमिकामा रहेकी भनिएको छ । तर, कार्यसमिति भन्दा बाहिर भने भट्ट बलियो रहेको बताइन्छ । भट्टलाई चुनावविज्ञका रुपमा हेरिन्छ । उनी मतदातालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सिपालु मानिन्छन् र जुनसुकै हदसम्म पनि जान सक्छन् । धेरै एनसीसीमा संस्थागतभन्दा पनि व्यक्तिगत सम्बन्ध रहेकाले भट्टलाई कम आँक्न नमिल्ने उनी निकटका मान्छेहरुले बताउने गरेका छन् ।
सङ्घको उपाध्यक्ष पदमा रसियाका डा. बद्री केसी, अमेरिकाका सोनाम लामा र खगेन्द्र जिसी, हङ्कङका त्रिलोक गुरुङमध्येको समूहले कुमार पन्तलाई सघाउनेछ । महिला उपाध्यक्षमा सपिला राजभण्डारी र रन्जु थापाको नाम चर्चामा छ । महासचिव पदमा कोषाध्यक्ष हिक्मत थापा र सचिव अर्जुन श्रेष्ठले दाबी गरेका छन् । सङ्घको संशोधित विधानअनुरुप २ सचिव र सहकोषाध्यक्ष समेत सो अधिवेशनले चयन गर्नेछ । सचिव पदमा वर्तमान मध्यपूर्व संयोजक डीबी क्षेत्रीले दाबी गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
त्यसैगरी सङ्घको अन्य पदाधिकारीमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ युरोप संयोजक कुल आचार्य (यूके), गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाका अध्यक्ष डा. केशव पौडेल (अमेरिका), एसी शेर्पा (अमेरिका), गणेश केसी–अस्ट्रेलिया), महेन्द्र लम्साल (अस्ट्रेलिया), कृष्ण पाण्डे (हङ्कङ), धरम केसी (साउदी अरब), चिरञ्जीवी थापा (जापान), रोवीन्द्र श्रेष्ठ (जापान), किरणविक्रम थापा (जापान) ले इच्छा व्यक्त गरेका छन् । महिला संयोजकमा रजनी प्रधानको दावेदारी रहने छ भने यूएईबाट कल्पना राईले समेत दाबी गर्ने छिन् ।
एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समितिका लागि मध्यपूर्व बलियो आधार हो । मध्यपूर्व नै निर्णायक शक्तिमध्येको एक हो । खाडीमा भएका एनआरएनमध्ये विभिन्न कुराले कतार तुलानात्मक रुपमा बलियो एनसीसी मानिन्छ । कतारमा भट्ट भन्दा पन्तको मत धेरै रहेको आँकलन छ । अन्य देशहरुमा भने भट्ट पन्त भन्दा अगाडि देखिन्छन् । मध्यपूर्वबाट पदाधिकारीका लागि डीबी क्षेत्री र धरम केसीको नाम चर्चामा छ । डीबी क्षत्री सचिव पदका दाबेदार हुन् । गत अधिवेशनमा सचिव पदमा उम्मेद्वारी दिएर हारेका केसी कुनै पनि पदमा बसेर एनआरएनए अभियानमा रहिरहने सोचमा छन् । तर कुन पदमा रहेर एनआरएनए अभियानमा निरन्तरता दिने बारे भने उनले केही बताएनन् । उनी पनि पदाधिकारी पदका आकाङ्क्षी हुन् । केसी र क्षेत्री लामो समयदेखि एनआरएन अभियानमा संलग्न व्यक्तिवहरु हुन् । तथापि उनीहरुलाई खाडीका केही पुराना एनआरएनएले उनीहरुको अस्तित्व खतरामा पर्ने ठानी अवरोध गर्न प्रयास गर्ने छन् ।
क्षेत्री अलिक हक्की स्वभावका मानिन्छन् । उनी पैसालाई भन्दा मुद्दालाई हेरेर निर्णय गरिनुपर्ने ठान्दछन् । उनको हजारे अभियान निकै लोकप्रिय अभियान रहेको थियो । सोही अभियानलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुलाई पेन्सनको दायारामा समेट्न प्रयास गरेको छ । तथापि नेपाल सरकारको यो निर्णय पूर्ण नभएको उनको जिकिर छ । उनी पेन्सन मात्रै नभएर सामाजिक सुरक्षाको मुद्दाका रुपमा हजारे अभियान सुरु गरेको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । क्षेत्री मजदुरप्रेमीका रुपमा मध्यपूर्वमा चिनिन्छन् । मजदुरका समस्या जरैदेखि उखेलेर फाल्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । कर्मचारीका बदमासीले खाडीका मजदुरले समस्या भोग्नुपरेको कुरा भन्न उनी हिच्किचाउँदैनन् । ‘एनआरएन चन्दाले चल्ने हैन, स्वावलम्बी बन्नुपर्छ,’ क्षेत्रीले उनका हरेक सम्बोधनमा भन्ने गर्दछन् । माछा खान दिएर हैन कि माछा मार्न सिकाउने एनआरएन अभियानमा लाग्नुपर्ने उनको तर्क रहेको छ ।
मध्यपूर्वबाट कतारका आरके शर्मा र साउदीका राजु शैयद अर्का बलिया उम्मेद्वार हुन् । तथापि उनीहरुले कुन–कुन पदमा दाबी गर्नेछन्, अहिले सम्म खुलाएका छैनन् ।
पूर्वअध्यक्षको सर्मथन कसलाई हुन्छ ?
वर्तमान अध्यक्ष शेष घलेले पन्तलाई साथ दिने सम्भावना रहेको छ । पहिलो कार्यकालमा घलेलाई सफल पार्न पन्तले निकै मेहनत गरेका थिए । तथापि व्यक्तिगत स्वभावका कारण घले कसैको पक्षमा खुल्ने सम्भावना एकदमै कम रहेको छ । यिनले अन्तिम समयसम्म पनि मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । पूर्व अध्यक्षहरुमा जिवा लामिछानेले पन्तलाई सहयोग गर्नेछन् ।
४ वर्षे कार्यकालको प्रतिष्ठाको विषय बनेको लाप्राक नमुना बस्ती र एनआरएन भवन परियोजना अक्टोबर महिनाभित्र पूर्णरुपमा सम्पन्न हुन सम्भव छैन । ती परियोजनालाई आफूले चाहेअनुरुप अगाडि बढाउन सक्ने विश्वासिलो नेतृत्वको खोजीमा घले छन् । यस्तै संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो अहिले सङ्घको चुनावी महोलभन्दा टाढा छन् । उनी जहिले पनि मध्यमार्गी भूमिकामा प्रस्तुत हुन चाहन्छन् । सङ्घको नेतृत्व सर्वसम्मत हुनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता रहेको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरुले बताउने गरेका छन् । अर्का पूर्वअध्यक्ष देवमान हिराचनले सङ्घको अभियान छोडिसकेका छन् । प्रमुख संरक्षक जीवा लामिछाने र पन्तबीच व्यावसायिक र व्यक्तिगत घनिष्टता गहिरो रहेको नेपाल ब्रिटेन डट कमले लेखेको छ । तर, अहिले जेजस्तो देखिए पनि फैसला भने २ वटा कुराले निर्धारण गर्ने छ, पैसा र राजनीति । यी दुवै कुरामा भट्ट निकै नै बलिया मानिन्छन् । तसर्थ पनि अबको अधिवेशनमा भट्ट कि पन्त भन्नेमा दह्रो प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना रहेको छ ।
विज्ञ र मजदुरविनाको एनआरएन
पछिल्लो समयमा एनआरएनप्रतिको आकर्षणमा कमी आएको छ । मध्यपूर्वका नेपालीहरु एनआरएन हैनन् भन्ने तर्क गर्नेलाई यसले बल पुगेको छ । एनआरएनमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुको उपस्थिति कम हुनु र पैसावालहरुको बोलवाला हुनुले एनआरएनको साख घटेको बताइन्छ । एनआरएन अन्तर्राष्ट्रिय समितिले आगामी कार्यकालको एनआरएन सदस्य बन्नका लागि १५ डलर शुल्क अनिवार्य गरेकाले पनि अब एनआरएन खाडीका मजदुरहरुबाट टाढिने आँकलन गरिएको छ । मजदुरहरुलाई नसमेटिनु र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुको उपस्थिति पनि नहुनुले विस्तारै एनआरएनको भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्नेछ ।